#၁၉ ဦးမှ #၁၅ ဦး၏ #dead #body #များ | democracy for burma
#၁၉ ဦးမှ #၁၅ ဦး၏ #dead #body #များ
tags: Burma, DEAD BODY, Embassy of Myanmar - Moscow, List, MISSING ONES, Pacific Plaza Hotel, RESCUED SAILORS, RUSSIA VESSEL ACCIDENT
မြန်မာသင်္ဘောသား (၂၂) ဦး၏ပြောက်ဆုံးသွားသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအား မြန်မာသံရုံးမော်စကိုမြို့မှ (၁) ရက်အတွင်းအမြန်ဆုံး အသစ်ပြန်လည်ထုတ်ပေးပြီး တောင်းပိုင်း Sakhalin မြို့သို့အမြန်ဆုံးပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီးမြန်မာသင်္ဘောသားများ ရသင့်ရထိုက်သော ရပိုင်ခွင့်များရရှိရေးအတွက် ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့်ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Embassy of Myanmar – Moscow အတည်မပြုနိုင်သေးသော ၁၉ ဦးမှ ၁၅ ဦး၏ dead body များ အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် Sann Win Hlaing, Ko Ko Maung, Thet Swe & Thein Tun တို့အား ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကယ်ဆယ်ထားပြီးသော မြန်မာသင်္ဘောသားများ PacificaPlaza Hotel သို့ ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ အခန်းများတွင်နေရာချထားပေးပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
422- Min Htoo Htet Aung, Min Rott Paik
423- Min Thein Oo, Naing Naing
424- Than Htike, Tin Htoo Naing
425- Zwe Wai Yan, Myo Min Oo
426- Phyo Min Thant, Aung Ko Oo
523- Pai Thu Oo, Wi Lin Moe
524- Thet Paing Oo, Pyae Phyo Lwin
526- Kyaw Kyaw, Htet Ko Ko
621- Win Htut, Kyaw Ye Aung
622- Yar Zar Kyaw, Zaw Myint Aung
623- Myo Zaw Win, Kyaw Swar Htut
မြန်မာသင်္ဘောသား (၂၂)ဦးနှင့်ဆက်သွယ်လိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
နေထိုင်သော အခန်းနံပါတ်များအား ဖေါ်ပြထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
from → Burma, MYANMAR, RUSSIA
← #THAILAND #DEMOCRACY #LAND #Reallocated to the #landless #Farmers
!! #THAILAND #Col. #Romklao #Thuvatham, was #shot by #Red #Shirt #sniper on #April #2010. →